I-Rustic Cabin, amabhulokhi angu-2 ukuya ogwini, ama-4 ukuya phakathi nendawo - I-Airbnb
I-Rustic Cabin, amabhulokhi angu-2 ukuya ogwini, ama-4 ukuya phakathi nendawo
San Juan del Sur, Rivas Department, i-Nicaragua
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Jan-Luc
U-95% wezivakashi zakamuva unikeze u-Jan-Luc izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Le ndlu yamapulangwe iyingxenye ye-Cabañas Lobotepe, inhlanganisela esondelene (ezinye izindawo eziqashiswayo zesikhathi esifushane nezesikhathi eside ezitholakalayo) ezisegqumeni eliseduze nendawo yokubhukuda yaseSan Juan. Inekhishi elihlome ngokuphelele, igumbi lokugezela lamanzi ashisayo, amagumbi okulala ama-2 (1 semi yangasese) kanye negumbi lokuphumula. Sekukonke ikhabethe lingama-75m2, kufaka phakathi ithala elimbozwe elingu-30m2 elinemibhede. Ikhabethe lizungezwe izihlahla (zezithelo). Ibanga elingu-200m kuphela ukusuka echwebeni no-350m ukusuka enkabeni ye-SJ. Indawo yokupaka yangasese kanye nomnakekeli kuyatholakala.
Le khabhinethi itholakala endaweni eyi-3000m2 enengadi egcwele izihlahla zezithelo (amalamula, amawolintshi, omango) kanye nezihlahla zokhuni oluqinile. Inamathafa omphakathi angu-2 anendawo yokosa inyama kanye nokubukwa okuhle kwetheku. Ukwengeza, sinendawo yokupaka izimoto eziyisi-6, isikhathi esiningi phakathi kwasemini nasebusuku kukhona abanakekeli.
I-Cabañas Lobotepe itholakala endaweni yabadobi ngemuva kwamatheku ohlangothini oluseningizimu yeTheku. Amabhulokhi angu-2 nje ukusuka ethekwini laseSan Juan del Sur kanye namanye ama-200m ukuya endaweni yokudlela ogwini. Abantu bakulo makhelwane banobungane kakhulu futhi bahlala ngaphandle (sicela ucabangele ukuthi ungezwa umsindo othile emgwaqweni emini nakusihlwa). Uzothola izitolo ezincane phakathi kwama-50m lapho ungathenga khona ukudla kwakho okuyisisekelo neziphuzo ngisho nezinhlanzi ezintsha! Ukufinyelela kalula usuka enkabeni yedolobha ngezinyawo nangemoto, emini nasebusuku.
Ngihamba kakhulu, ngenxa yalokho angihlali ngikhona emagcekeni. Kodwa-ke, abanakekeli (uFernando, uRebeca noDennis) abanomthwalo wemfanelo wokunakekela izindlu, ukuhlanza nokulungisa izingadi, bakhona ukuze bakusize futhi kufanele bakwazi ukuxazulula izinkinga zakho eziningi. Uma kwenzeka ufuna ukuxhumana nami mathupha, ngihlala ngitholakala ngocingo noma nge-imeyili. Kuyenzeka futhi ngicele omunye wabanakekeli ukuthi angishayele, ukuze sikhulume ngqo ocingweni. Uma ngikhona ungadlula ukuze uxoxe engikuthandayo ukuhlangana nabantu abasha futhi wabelane ngolwazi lwami ngeNicaragua.
Ngihamba kakhulu, ngenxa yalokho angihlali ngikhona emagcekeni. Kodwa-ke, abanakekeli (uFernando, uRebeca noDennis) abanomthwalo wemfanelo wokunakekela izindlu, ukuhlanza nokulungi…